गाउँको ठेगाना टिपाउँदा काठमाडौंका संक्रमित खोज्न समस्या पत्रपत्रिकाबाट१७ असार २०७७
तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क बन्दै राजधानीको तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा पर्ने तीनकुने वर्षौंदेखि मुुआब्जा विवादले खाली रहँदै आएको छ । पत्रपत्रिकाबाट१७ असार २०७७
समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का सङ्क्रमित पुष्टि हुन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश सङ्क्रमित बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका रहेकोमा पछिल्लो समय समुदायस्तरमै कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि हुन थालेका हुन् । पत्रपत्रिकाबाट१७ असार २०७७
श्रीमतीले फोन रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि तनावमा नबाजुद्दिन बलिउड अभिनेता नबाजुद्दिन सिद्धिकीको पारिवारिक विवाद झनै बढेको छ । उनकी पत्नी आलिया सिद्धिकीले आफूलाई पतिले फोनमार्फत् धम्की दिएको भन्दै सो फोन रेकर्ड सार्वजनिक गरेकी हुन् । पत्रपत्रिकाबाट१७ असार २०७७
२ वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सरकारले २ वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने भएको छ । भूउपग्रह स्थापनासँगै नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने छ । पत्रपत्रिकाबाट१७ असार २०७७
श्रमिक उद्धार निर्देशिका तयार सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर स्वीकृतका लागि सोमबार मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ । पत्रपत्रिकाबाट१६ असार २०७७
को बन्ला नयाँ आईजी ? पाल र क्षेत्री प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रहरीले अबको केही दिनभित्रै नयाँ प्रहरी प्रमुख पाउँदै छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली २४ असारपछि ३० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको हो । पत्रपत्रिकाबाट१६ असार २०७७
मिलेमतोमा भ्रष्टाचार, लेखापालविरुद्ध मात्र मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलपोत कार्यालय बारामा कार्यरत लेखापाल युगलकिशोर ठाकुरले राजस्वबाट उठेको रकम आफ्नो खातामा राखेको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । पत्रपत्रिकाबाट१६ असार २०७७
कोरोना कोषबाट एकै पटक साढे ५५ करोड निकासा सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथा, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट एकै पटक साढे ५५ करोड रुपैभन्दा बढी झिकेर खर्च गरेको छ । पत्रपत्रिकाबाट१६ असार २०७७
यही वर्षबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । पत्रपत्रिकाबाट . शिक्षा१६ असार २०७७
नेपालको अखण्डतालाई चीन सधैँ सम्मान गर्छ : राजदूत यान्छी नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले चीन र नेपालबीच सन् १९६१ मा विवादरहित ढङ्गले सीमा सम्झौता भएको स्मरण गर्दै २ देशबीच सीमा विवाद नरहेको बताउकी छन् । पत्रपत्रिकाबाट१६ असार २०७७
पशुपतिका शिवलिंग घरभित्र पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट अन्नपूर्ण भण्डारतिर आउँदा बाटोमा एउटा घर छ। लामो कालखण्ड पार हुँदै जाँदा त्यही घरभित्र थुनिन पुगेको छ- पशुपति मन्दिरको ऐतिहासिक शिवलिंग। पत्रपत्रिकाबाट१५ असार २०७७
स्वास्थ्यमन्त्रीको बोली एउटा, वास्तविकता अर्कै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले १५ असारदेखि दैनिक १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गरिने बताए पनि पछिल्लो १ सातामा परीक्षण दर भने खुम्चिँदै गएको छ । पत्रपत्रिकाबाट१५ असार २०७७
हरिवंशको नक्कली ट्विटर रियल हरिवंश ट्विटर हेन्डिलबाट यही मे ३१ अर्थात् जेठ १८ गते एउटा सूचना प्रवाह गरियो, ‘फेसबुकमा सबैसँग जोडिएर माया साटासाट गरिन्थ्यो। अब ट्विटरतिर नि आएको छु। यहाँहरूको मायाको अपेक्षा गर्दछु।’ यो सन्देश १५ सयजनाले लाइक गरेका छन्। पत्रपत्रिकाबाट१५ असार २०७७
विज्ञ भन्छन्, ‘नेपालमा देखिएको सलहबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’ अफ्रिकाबाट भारत हुँदै शनिबार नेपाल प्रवेश गरेको सलहले ठूलो क्षति पुर्‍याउन नसक्ने बताइएको छ । सर्लाही, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, सिन्धुली, चितवन, रामेछापलगायत जिल्लासम्म सलह पुगे पनि यसले आइतबार साँझसम्म खासै क्षति गरेको छैन । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा नियन्त्रण प्रयास अगाडि बढाइएको छ । पत्रपत्रिकाबाट१५ असार २०७७
विद्युुतीय बस खरिद प्रक्रिया सुुरु सरकारले विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको करिब ६ महिनापछि सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । साझा यातायातले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको छ । पत्रपत्रिकाबाट१५ असार २०७७
लयमा फर्कंदै औद्योगिक करिडोर ३ महिने बन्दाबन्दीपछि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर पुनः चलायमान भएको छ । लामो अवधिसम्म बन्द रहेका उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइनसकेको भए पनि पछिल्ला दिनमा करिडोर क्षेत्र चलायमान भएको उद्योगी/व्यवसायीले बताएका हुन् । पत्रपत्रिकाबाट१४ असार २०७७